Uyilo Lwekhaya | Eyekhala 2022
Iimbono ezingama-54 zePatio kuHlahlo-lwabiwo mhlaba kunye noYilo lwangaphandle
Awudingi uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu ukwenza indawo yepatio efanelekileyo yokuphupha. Fumana ezi ngcamango zilula kwaye zifikelelekayo kuhlahlo-lwabiwo mali.
Iingcamango ezingama-80 eziHlangayo ezishushu ezishushu zeTub Deck-Ukuphumla kuyilo lwasemva kwendlu
Fumanisa ulwandiso lwangaphandle lwasekhaya oluneengcamango ezingama-80 ezishushu zokubhabha ezishushu. Jonga uyilo lwasemva kwendlu olwenzelwe ukonwabela unyaka wonke.
Ezona Mvo ziPhambili zingama-80 + zeMantel zokuhombisa ezihonjisiweyo-ukuhonjiswa kwasekhaya kunye noyilo
Ukuba ujonge izitshixo zemantel zokuhombisa, jonga ezi zinto zimangalisayo zokuhombisa ngomlilo. Ezi ziimvo ezingama-80 + ezilungileyo kwezi mpawu zikhethekileyo.
Iimbono ezingama-70 eziGqwesileyo zodonga lweTV-Igumbi lokuPhila kuyilo lweTV
Guqula igumbi lakho lokuzonwabisa ngeyona miboniso ingcono yama-70 yodonga lweTV. Jonga imiboniso kamabonakude epholileyo kunye nokhuthazo loyilo lodonga.
Iimbono ezingama-39 zeGumbi lokuPhila eliGqwesileyo eliPhambili-Ikhaya laseKhaya kunye noYilo
Guqula indawo yakho yokuhlala kwigumbi elimxinwa ukuya kwinto engakholelekiyo kwezi ngcamango zincinci zingakholeleki kwigumbi lokuhlala.
Iingcamango zokulala zamadoda ezingama-60-Ukuphefumlelwa koyilo lwangaphakathi lwamadoda
Nika igumbi lakho lokulala elimdaka, nelikruqulayo umnxeba wesini, isitayile sobudoda kunye nemibono yokulala yamadoda angama-60. Fumana ukuphefumlelwa kokuhombisa ukusuka ebumnyameni ukuya kwimizi-mveliso.
Iingcamango ezingama-60 eziPhambili ze-Stair Trim - I-Staircase Designing Designs
Ukusuka kwibhodi yebholabhodi yanamhlanje ukuya kwisitayile sikaloliwe esiqhelekileyo, fumana ezona mvo zingama-60 ziphambili zokunyathela izitepsi. Jonga izinyuko zokubumba kwangaphakathi.
Iingcamango ezingama-98 eziMnyama eziMnyama eziMhlophe kunye neMhlophe-Ikhaya laseKhaya kunye noYilo
Fumanisa ezona zimvo zingama-98 zingcono zekhitshi ezimnyama namhlophe. Vumela umahluko ocacileyo weekhabhathi ezimnyama nezimhlophe kunye nokubeka umgangatho phantsi kukhuthaze iprojekthi yakho elandelayo.
Iimbono ezingama-60 eziBalaseleyo zoBiyelo lwale mihla-Uyilo lwangoku lwaNgoku
Ukusuka kwi-IPE slats yeenkuni ukuya kwizikrini zetsimbi kunye nokunye, fumana ezona ziphezulu zingama-60 zeengcinga zangoku zocingo. Jonga uyilo lweli xesha langaphambili nangasemva.
Iingcamango ezingama-60 eziPhambili zeNja zoBiyelo lweNja-Canine Barriers Designs
Khusela inja yosapho oluthandayo ngezona zimvo zingaphezulu zingama-60 zibalaseleyo zocingo lwenja. Ukusuka kwimithi ye-rustic kunye nocingo lwentsimbi ukuya kwisinyithi sale mihla, fumanisa uyilo lwesithintelo se-canine.
Iingcamango ezingama-70 eziBalaseleyo zeBhedi yokulala-Indawo yokuGcina iiNdawo zokuGcina igumbi lokulala
Fumana isithuba sithuba kunye nokulala okuvakalayo kwihlabathi lesitayile kunye nokonwaba ngeyona nto ibalaseleyo yokulala kwebhedi. Jonga abantu ababini ukuya kwesine bomntu kunye nangaphaya.
I-50 yeNdawo yokuGqibela yoMntu emiQolombeni ukuThoba unxano lwakho
Jonga izimvo ezingama-50 zokugqibela zomqolomba wamadoda. Ukusuka kwimivalo encinci yekona yohlahlo-lwabiwo mali ukuya kwimigangatho engaphantsi yamakhaya enokuthi isebenze yonke indoda ekuhlaleni.
Iingcamango ezingama-75 zeOfisi yeKhaya eNcinci yamadoda-Uyilo lwangaphakathi lwamadoda
Mfutshane kwisikwere sevidiyo? Jonga ezona ziphezulu zingasentla ezingama-75 zeofisi zekhaya ezinamadoda anoyilo lwangaphakathi lwamadoda kunye nenkuthazo yokuphefumlelwa kwe-DIY.
Iingcamango ezingama-60 eziPhambili zeMpawu zeMpawu zeYard zangaphambili-Uyilo lwangaphandle lweZithintelo
Ngaba ujonge izimvo zocingo lwangaphambili? Sinegalari yee-60 eziPhambili zeMpawu zeMpawu zePlanga. Jonga ezi zimvo zibiyelweyo ziphambili ziyadi!
Iingcamango ezingama-50 eziPhambili zeKhitshi zokuKhanyisa iiKhitshi - Ukulungiswa kwangaphakathi kokuKhanya
Ukusuka kumacici amancinci ukuya kwikhulu kunye ne-rustic yoyilo lwala maxesha, fumana ezona ziphezulu zingama-50 zeekhitshi zokukhanyisa iziqithi. Jonga izinto ezizodwa zokukhanya ngaphakathi.
Iingcamango ezingama-60 eziPhambili zeBhari yeKofu-Uyilo oluPholileyo lweJava yeCafe
Ukusuka kwiikomityi ezishushu zikaJoe ukuya kwi-espresso ene-steamy, fumana ezona ngcinga zingcono zingama-60 zekhefi zekofu. Jonga uyilo oluhle lwe-java café yekhaya lakho.
Iingcamango ezingama-40 eziPhambili zeNkcazo zokuBumba iiNkcazo - iiMpawu zangaphakathi zangaphakathi
Fumana ukuphefumlelwa okukhanyayo okuphezulu kwezi mini kunye nezona ziphezulu zibalaseleyo zesithsaba sokubumba izimvo. Jonga uyilo lwangaphakathi olwahlukileyo.
Iingcamango ezingama-60 eziPhezulu zeSitishi sokuHanjiswa kweNja yaseKhaya-iCanine Shower Designs
Fumanisa ezona ndawo ziphambili zingama-60 zezona ndawo zesitishi sokuhlamba inja ezinendawo ezikhethekileyo zokuhlamba intshontsho lakho. Jonga uyilo lweshawa lwe-canine.
Iingcamango ezingama-60 eziGrey zeGumbi lokuhlambela eziGrey eziPhambili- Uyilo lwangaphakathi olungathathi hlangothi
Fumanisa i-rustic kwiipateni zangoku zokuthayipha kunye neengcamango ezingaphezulu kwama-60 ezingwevu zokuhlambela. Jonga udonga lwangaphakathi olungathathi hlangothi kunye noyilo lomgangatho.
Iipropati ezingama-70 eziPhezulu zeTayile eziGuqula uMgangatho weeNgcali- iiYilo zoMgangatho
Ukusuka kwiipateni zeethayile zejiyometri ukuya kubhedu obuncanyathisiweyo kunye nemicu yesinyithi, fumana iitayile eziphezulu ezingama-70 ezingcono kwimibono yokutshintsha komgangatho. Jonga uyilo lomgangatho.
tattoo encinci yokhozi ngesandla
imibono yegumbi elipholileyo kubafana
Isuti eblowu inezihlangu ezimnyama
umzobo we-ankile ndala ukutshona